Ntinye na nhazi onwe nke Antergos GNOME [ISO April 2015] | Site na Linux
Ntinye na nhazi onwe nke Antergos GNOME [ISO April 2015]
Jlọ | | Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Agbalịrị m ọtụtụ distros ebe m banyere ụwa nke GNU / Linux, echekwara m mgbe niile ma ọ bụrụ na enwere mwepụta ị mere nke ọma.
Ihe kachasị mma m gbalịrị bụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, KaOS. O zughi oke, mana ọ bụ ọ kacha nso izu oke. Nsogbu bụ na KaOS lekwasịrị anya naanị na 64 ibe n'ibe na KDE. Enwere ezigbo iwepụ maka ịhapụ GNOME? Fewbọchị ole na ole gara aga achọtara m azịza: Ee, Antergos.
Ka m kpebiri ịkwụsị Fedora, m wụnye ya iji nwalee ya, ma e wezụga ụfọdụ nsogbu a kapịrị ọnụ na PC m, nsonaazụ ahụ dị oke mma. N'ebe a, m na-enye onye ọ bụla ntinye na nhazi nke Antergos dị ka m na-amasị. Enwe;).
2 Ntinye nke Antergos na ngwanrọ niile
4 Idozi Ihe Oyiyi Numix Adighi egosi
5 MGBE: ofwa nke Warcraft
6 Ọgwụgwụ nke ndu
Antergos bụ nkesa GNU / Linux dabere na Arch. Nke ahụ pụtara na ọ na-agbapụta-ntọhapụ, sọftụwia niile dị ugbu a, ọ nwere otu n'ime nnukwu nchekwa, yana onye njikwa ngwugwu kachasị ngwa ngwa: Pacman.
Na mgbakwunye na "iketa" atụmatụ Arch, Antergos nwere ihe nrụnye nke ya (Cnchi), nke ị nwere ike iwunye ya ma họrọ ebe desktọọpụ kachasị amasị gị (ọ bụghị karịa ISO maka gburugburu ebe ọ bụla!).
Banyere imewe, Antergos na-eweta ndabara Numix akara ngosi na gburugburu (Ọ bụrụ na ọ masịghị gị, ị nwere ike ịgbanwe ya), agbanyeghị na ekwesịrị m ikweta na na mbụ ọ dịka ihe ijuanya nye m, emesịa ọ dị ka nke zuru oke: Ọ dị mfe ma maa mma. N'ihe banyere GNOME ọ nwekwara ụfọdụ ndọtị etinyegoro ya.
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, ị ga-amụta otu esi wụnye Antergos na GNOME kpọmkwem otu masịrị m. Agaghị m amalite kewaa iwu, na-akọwa ha otu otu, wdg. Aga m erute na isi. Usoro a ga - enweta ga - enweta sọftụwia niile m weere dị ka nke kacha mma, nke dị elu, yabụ ọ bụrụ na ị kwenyeghị m, ị nwere ike ịgbanwe ya maka nke ị na - eji i mechaa ndu.
Nsonaazụ ikpeazụ ga-abụ nke a:
Na ntuziaka a akara ngosi niile ga-abụ Numix. Onye obula. Enwere m nlekọta na-agbazi ndị na-adịghị arụ ọrụ nke ọma na ọbụnakwa na otu enyi haziri PPSSPP otu, nke na-efu.
Kedu sọftụwia ị ga-etinye ntuziaka a?
Desktop gburugburu ebe obibi: GNOME
Onye na-enyocha weebụ: Firefox (+ AdobeFlash)
Onye ndezi ederede (maka mmemme): Atọm
CD / DVD edekọ: Brasero
Nkebi njikwa: GParted
Office akpaaka: FreeOffice
Image edezi: GIMP
Ihe osise (mfe): Pinta
Ịbịaru (elu): nzu
Imewe Vector: Inkscape
Raw oyiyi: RawTherapee
Egwú egwu: Rhythmbox
Ihe nchịkọta akụkọ nke ọdịyo: MfeTAG
Ndezi ụda: Odudu, Ardor
Ngwaegwu vidio: MPV
Vidio mbipụta: Pitivi
3d imewe: blender
Na-aga aga: Ụlọ ihe nkiri Synfig
FTP ahịa: FileZilla
Torrent ahịa: nnyefe
Nkata (ederede): Telegram (chọrọ ekwentị mkpanaaka)
Nkata (olu): Skype
Egwuregwu: 0.AD, Nke pere mpe, SuperTuxKart
Ndị emulators: PCSXR (PSX), PCSX2 (PS2), VBA-M (GBA), Dolphin (GC na Wii), DeSmuME (NDS), PPSSPP (PSP)
Virtual igwe: Virtualbox
[EXTRA] ofwa nke Warcraft
Jụụ? Ya mere, ka anyị gawa!
Ntinye nke Antergos na ngwanrọ niile
Ntinye enweghi ihe omimi; M ga-ekwu nke ahụ Antergos nwere onye nrụnye kachasị mma nke ọgba aghara niile. Ọ bụrụ na i tinyeworị Ubuntu, Fedora ma ọ bụ ihe ọzọ dị mfe iji wụnye, Antergos ga-abụ otu achịcha. Cheta ịhọrọ GNOME (nke bụ ihe ntuziaka a maka). Mgbe m jụrụ gị ihe ọzọ software ị chọrọ, hapụ ya dị ka nke a:
Mgbe ahụ metụ nhazi nke nkebi (nke na-enye gị nhọrọ ịme ha na akpaghị aka ma ọ bụ aka aka), wee jiri data njirimara gị na n'ikpeazụ nwụnye. Mgbe ọ gwụsịrị, ọ ga-arịọ gị ka ịmalitegharịa ma ị ga-anọ na Antergos awụnyere ọhụrụ.
Mgbe nbanye maka oge mbụ (ị ga-achọpụta na ọ bụghị GDM, mana LightDM nwere atụmatụ ya) windo ga-apụta na-ajụ gị ma ịchọrọ melite aha nke nchekwa na Spanish. Lelee "Ajụla m ihe a ọzọ" ma melite aha ndị ahụ:
Emechaa anyị na-imelite iji mmemme "Sọftụwia Software". Ọ ka mma na ị na-eme ya oge niile na mmemme ahụ, ebe ọ na-ebudata nchịkọta AUR nke anyị wụnye. Ka o sina dị, Antergos na-eweta usoro ngosi nke ga-agwa gị oge ọ bụla ị ga-emelite. Ozugbo m gwụchara, ibido ma mepee onu. Gbaa ndị na-esonụ:
Faịlụ nhazi Pacman ga-emeghe. Ebumnobi anyị bụ rụọ ọrụ ebe nchekwa na Multilib (ọ bụrụ na i jiri bits 32 EME emeghị nke a), nke anyị ga-eme site na ihichapụ "#" nke na-egosi na mbido usoro abụọ a:
[multilib] Gụnye = /etc/pacman.d/mirrorlist
Anyị na-echekwa, mechie ma melite ebe nchekwa:
Ka anyị soro ndị na-anya kaadị eserese. Ọ bụrụ n'ijighị NVIDIA, ị gaghị eme ihe ọ bụla ma ọlị, ebe ọ bụ na a na-arụnyere ndị ọkwọ ụgbọala n'efu (emeghe) na ndabara, nke na-arụ ọrụ nke ọma n'ọtụtụ eserese. Ọ bụrụ na ị na-eji Nvidia na ị chọrọ iji nwe ọkwọ ụgbọ ala (emechi), ị ga-eji otu iwu ma ọ bụ ọzọ dabere na ụdị ị nwere.
Nchịkọta ndị bidoro na “lib32-” bụ naanị 64-bit
Ọ bụrụ na ị na-eji NVIDIA ọgbara ọhụrụ:
sudo pacman -R xf86-video-nouveau && sudo pacman -S nvidia nvidia-libgl nvidia-utils opencl-nvidia libvdpau mesa-vdpau lib32-nvidia-libgl lib32-nvidia-utils lib32-opencl-nvidia lib32-libvpa vdpau
Ọ bụrụ na ị na-eji ochie NVIDIA (lelee ebe a, Na ngwaahịa akwadoro):
sudo pacman -R xf86-video-nouveau && sudo pacman -S nvidia-340xx nvidia-340xx-libgl nvidia-340xx-utils opencl-nvidia-340xx libvdpau mesa-vdpau lib32-nvidia-340xx-libgl lib32 nvid lib340-opencl-nvidia-32xx lib340-libvdpau lib32-tebụl-vdpau
N'ọnọdụ abụọ ọ ga-ajụ gị ma ọ bụrụ na ọ dochie ngwugwu abụọ dị na esemokwu. Gwa onye ọ bụla ee. Ọ bụrụ na eserese gị ka okenye karịa ndị chọrọ ọkwọ ụgbọala 340 ahụ, ọ ga-abụ na Nouveau (onye ọkwọ ụgbọ ala anaghị akwụ ụgwọ) na-arụ ọrụ nke ọma maka gị. N'ikpeazụ, n'ihe banyere NVIDIA ọ bụla nwere onye ọkwọ ụgbọ ala, ị ga-enwerịrị reboot.
Ndo ịsị na enweghị m ihe ọ bụla maka ndị ọrụ NVIDA Optimus. Na laptọọpụ enyi na teknụzụ ahụ LiveCD adịghị arụ ọrụ, yabụ enweghị m ike nwalee etu Bumblebee si arụ ọrụ :(.
Anyị na-ewepụ sọftụwia anyị agaghị eji ma ọ bụ nke nwere ụzọ ọzọ dị elu:
sudo pacman -R pidgin cmake ọmịiko totem gnome-disk-ịba uru gnome-akwụkwọ gnome-photos gnome-music bijiben
Anyị na-etinye niile software na otu iwu (cheta na ọ bụrụ na ị jiri 32 ibe n'ibe na nchịkọta na-amalite na "lib32-" ị gaghị awụnye ha):
sudo pacman -S git mercurial lsdvd libdvbpsi libdvdread libdvdnav gnome-kalenda gnome-clocks mpv gimp inkscape mypaint pint calligra-krita rawtherapee blender synfigstudio dị mfe-i scanomi minstest 0ad supertuxkart audacity ardor pysy plugins -plugins easytag filezilla flashplugin lib0-flashplugin gnome-font-viewer gparted Virtualbox virtualbox-host-modules virtualbox-host-dkms linux-headers vbam-gtk desmume dolphin-emu pcsxr pcsx18 ppsspp mupen32plus lib2-libcanberra-libcanulra libsapulse -plugins dconf-nchịkọta akụkọ skype evolution gnome-kọntaktị
Echefula ịza ee n’ajụjụ maka ngwungwu ndị na-emegiderịta onwe ha.
Iji hụ na VirtualBox ga-arụ ọrụ maka anyị:
sudo systemctl enyere dkms.service aka
Anyị na-emeghe mmemme "Tinye / Wepu" ma wụnye nchịkọta "preload", "atom-nchịkọta akụkọ" na "telegram-bin" site na ebe ahụ. Mgbe a jụrụ gị ma ịchọrọ ịgbanwe ụfọdụ faịlụ nhazi, zaa mba. N'ọnọdụ ụfọdụ ọ ga-ezu iji dee akwụkwọ ozi ahụ s o n, ebe na ndị ọzọ ị ga-pịa Intro. Mgbe emechara anyị mechie ya.
Iji rụọ ọrụ Preload:
sudo systemctl enyere preload.service aka
Ọ bụrụ na ị mmemme na Haskell ị na-eji PostgreSQL dị ka m, na-agba ọsọ a:
sudo pacman -S postgresql ghc cabal-wụnye haddock obi ụtọ alex
N'ikpeazụ, anyị wụnye ndọtị a iji gosipụta ihe ngosi atẹ n'elu ogwe dị n'elu. Anyị na-agbanye.
Iji gaa ọsọ ọsọ, aga m etinye ihe niile n'ụzọ eserese.
Nhazi nke GNOME:
Chọọ> Anyị gbanyụọ ihe anyị achọghị ịchọ (n'ọnọdụ m: ihe niile)
Fund> Anyị na-etinye ego na-amasị anyị (M nwere ike ikwu nke a)
Ma Ọkwa> Anyị deactivate naanị ndị nke Rhythmbox
Mpaghara na asụsụ> Tinye ihe niile na Spanish
Ike> Ihuenyo gbanyụọla
>da> Mmetụta ụda> Mee ka ""da" rụọ ọrụ
Ahụigodo> Uzo mkpirisi>
Dee> ikpegara igodo: Right Ctrl (nnọọ uru n'ihi na ihe ọhụrụ odide)
Nchikota omenala> Tinye:
Aha: Mepee ọnụ
Anyị na-ahazi ya na Ctrl + Alt + T (n'ụzọ dị otú a, anyị ga-emeghe ọnụ nke ọma, dịka na Ubuntu)
Nkọwa> Ndabara ngwa ọdịnala>
Foto: Ihe onyonyo
Bọchị na oge> Mee ọ rụọ ọrụ «Akpaaka ụbọchị na ugbu a» na “Akpaaka oge mpaghara”
Ndị ọrụ> Anyị na-etinye na avatar anyị chọrọ
Nhazi nke Aka-elu ngwá ọrụ:
Ọdịdị> Kwado "Okwu Gbara Ọchịchị Globalwa"
Oke mmanya> Mee ọ rụọ ọrụ "Gosi ụbọchị"
Ahụigodo na òké> gbanyụọ “Tapawa na etiti pịa”
Mgbatị> Anyị na-ahapụ ọrụ naanị
Lightdm mkpọchi ihuenyo
Isiokwu ndị ọrụ
Ahụigodo na òké> gbanyụọ «Tapawa na etiti pịa»
Aha windo: Noto Sans Regular 11
Okwu: Noto Sans Regular 11
Ihe ederede: Noto Sans Regular 11
Monospaced: Isi Iyi Usoro Pro Regular 11
Okike nke ebe oru: Static
Ọnụ ọgụgụ ebe ọrụ: 7
Nhazi nke Nautilus (Archives):
Nlele> Mee ọ rụọ ọrụ "Tinye folda tupu faịlụ"
Àgwà> Mee ọ rụọ ọrụ "Jụọ oge ọ bụla"
Nhazi nke GNOME Ọnụ:
General> Gbanyụọ "Gosi mmanya mmanya na ọdụ ọhụrụ na ndabara"
Nhazi nke gedit:
Mee ọ rụọ ọrụ "Gosi nọmba akara"
Mee ọ rụọ ọrụ "Gosi oke aka nri na kọlụm: 80"
Mee ọ rụọ ọrụ "Chetara gị akara ugbu a"
Mee ọ rụọ ọrụ "Pụta mata abụọ brackets"
Obosara taabụ: 4
Mee ọ rụọ ọrụ "Fanye oghere kama taabụ"
Kwado "Kwado akpaaka akpaaka"
Akara ókwú na agba> Họrọ "Ọchịchịrị nke anyanwụ" (Ọchịchịrị nke ọchịchịrị)
Ngwa> Dị ka ihe kachasị amasị gị
Nhazi nke Rhythmbox:
Ngwa mgbakwunye> Hapụ naanị: Cover Art Search, Grillo Media Browser, MediaServer2 D-Bus Interface, MPRIS D-Bus Interface, na Visualization
General> Mee ọ rụọ ọrụ "resdị, ndị omenkà na ọba"
Music> Mee ọ rụọ ọrụ "Lelee ọba akwụkwọ egwu m maka faịlụ ọhụrụ"
Nhazi nke nnyefe:
Downloads> Zọpụta na ebe: Downloads / Iyi
Desktop> Mee ọ rụọ ọrụ "Na-egbochi ụra mgbe iyi na-arụ ọrụ"
Nhazi nke Firefox:
Mee ọ rụọ ọrụ "Lelee mgbe niile ma ọ bụrụ na Firefox bụ ihe nchọgharị gị na ndabara"
Homepage: https://duckduckgo.com (na DuckDuckGo nhọrọ, gbanwee nhazi na oji)
Chọọ> Anyị na-etinye DuckDuckGo ma kpochapụ nhọrọ ndị ọzọ
Nzuzo> Mee ọ rụọ ọrụ «Gwa saịtị na achọghị m ka esoro m»
Add-ons to install: Flagfox, Adblock Edge and HTitle (wepụ «acykpụrụ Nlereanya» na nhọrọ gị)
Mee ọ isiokwu: Numix gbara ọchịchịrị GTK
Ọ na-ewute gị na oge ọ bụla ị pịa bọtịnụ etiti nke òké n'èzí njikọ ọ na-eziga gị na peeji nke gara aga? Wee dee banyere: config na adreesị mmanya, chọọ "Middlemouse.contentLoadURL" wee tọọ ya na "ụgha".
Anyị na-eme ihe ndị a iji mepee telegram ma mepụta launcher gị:
/ opt / telegram / Telegram
Anyị hazie ya:
Gbanyụọ "Gosi nhụchalụ ozi"
Gbanyụọ "Dochie emojis"
Họrọ ndabere site na gallery
Gbanwee asụsụ (anyị na-asụ Spanish)
Nhazi nke Skype (mgbe ijikọ):
Izugbe> Chekwaa faịlị na: Downloads
Ngwaọrụ ụda> Gbanyụọ "Kwe ka Skype gbanwee ihe m na-agwakọta na-akpaghị aka"
Anyị na-ahazi Git (tinye data gị):
git config --global user.name "Aha njirimara"
git config –global user.email "address@detuemail.com"
Anyị na-etinye nchịkọta dị mkpa maka Atọm:
apm wụnye minimap onye na-atụtụ ihe na-atụtụ nchekwa-nnọkọ pụta ìhè-ahọrọ ọrụ-njikwa ọrụ seti-ui seti-syntax
Nhazi nke Atọm:
Lee> Toggle Menu Bar (mgbe ị chọrọ igosi, pịa Alt)
Ezigbo ezinụlọ: Isi mmalite Usoro Pro
Font nha: 15
Mee ọ rụọ ọrụ "Pịgharịa gara aga Ọgwụgwụ Ọgwụgwụ"
Mee ọ rụọ ọrụ "Soft Kechie"
Tab Ogologo: 4
UI Isiokwu: Seti
Okwu mmechi: Seti
Anyị na-emechi Atọm.
Ọ bụrụ na ịchọrọ mmemme na HTML5:
apm wụnye linter linter-htmlhin linter-csslint linter-jshint atom-html-preview autoclose-html
Ọ bụrụ na ịchọrọ mmemme na Haskell:
apm wụnye asụsụ-haskell autocomplete-tinyere ide-haskell asụsụ-shakespeare
cabal wụnye nkecha-haskell ghc-mod
Ka ihe pụrụ iche '' ide-haskell '' rụọ ọrụ ị ga-arụ ọrụ ndị a:
gedit ~ / .atom / config.cson
Ma tinye na njedebe nke faịlụ a (gbanwee "lajto" maka aha njirimara gị):
'ide-haskell': 'ghcModPath': '/home/lajto/.cabal/bin/ghc-mod' 'stylishHaskellPath': '/home/lajto/.cabal/bin/stylish-haskell'
Ọ bụrụ na ị mmemme na PL / pgSQL:
apm wụnye asụsụ-pgsql
Idozi Ihe Oyiyi Numix Adighi egosi
Ọ dị ka ụfọdụ ndị launchers anaghị ahazi nke ọma iji akara ngosi Numix. Ma echegbula, anyị ga-agbazi ha!
Ka anyi bido telegram. Anyi mepee folda nkeonwe ma pịa Ctrl + H. Anyị na-aga .local / share / applications / ma hichapụ onye na-ebupụta Telegram. Anyị na-emechi onye na-enyocha faịlụ ahụ ma gbue ya:
gedit .ihe / òkè / ngwa / telegram.desktop
Anyị na-e copyomi ederede na-esonụ n'ime:
#! / usr / bin / env xdg-open [Desktop Entry] Encoding = UTF-8 Aha = Aha Telegram [hr] = Telegram Exec = / opt / telegram / Telegram Icon = / usr / share / icons / Numix-Square / scalable / ngwa ọdịnala / telegram.svg Terminal = ụgha Type = Ngwa Categories = Ngwa; StartupNotify = ụgha
Ndị na-esonụ dị mfe.
para Ardor anyị na-emezu "sudo gedit /usr/share/applications/ardour.desktop" ma mezie Icon ka ọ bụrụ "Icon = / usr / share / icons / Numix-Square / scalable / apps / ardour.svg".
para hlip anyị na-emezu "sudo gedit /usr/share/applications/hplip.desktop" ma mezie Icon ka ọ bụrụ "Icon = / usr / share / icons / Numix-Square / scalable / apps / hplip.svg".
Ọ bụrụ na iji NVIDIA mechiri, anyị na-eme "sudo gedit /usr/share/applications/nvidia-settings.desktop" wee gbanwee Icon ka ọ bụrụ "Icon = / usr / share / icons / Numix-Square / scalable / apps / nvidia.svg"
Anyị na-gbanwee akara ngosi nke atọ launchers Avahi itinye ya ka "Icon = / usr / share / icons / Numix-Square / scalable / apps / network-workgroup.svg":
sudo gedit /usr/share/applications/bssh.desktop
sudo gedit /usr/share/applications/bvnc.desktop
sudo gedit /usr/share/applications/avahi-discover.desktop
N'ikpeazụ anyị nwere akara ngosi nke PPSSPP... O di nwute na Numix emeghi ya, mana echegbula! Ajụrụ m otu enyi ka ọ hazie ya ma bulite ya na ebe nchekwa GitHub. Iji tinye akara ngosi na mkpokọta Antergos gị na-agbaso iwu ndị a:
cd / usr / share / icons / Numix-Square / scalable / apps /
sudo wget -O ppsspp-numix-icon-by-kaero.svg https://raw.githubusercontent.com/Lajto/numix-icons-not-created-yet/master/ppsspp-numix-icon-by-kaero.svg
sudo gedit /usr/share/applications/ppsspp.desktop
Anyị na-agbanwe Icon ka ọ bụrụ "Icon = / usr / share / icons / Numix-Square / scalable / apps / ppsspp-numix-icon-by-kaero.svg". Njikere!
MGBE: ofwa nke Warcraft
Na-akpọ WoW? Mgbe ahụ, anyị adịlarị abụọ! Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ị ga-eji boot abụọ na Windows naanị na naanị igwu egwu, yabụ ebe a, m ga-akọwa otu esi eji Wine mee ihe iji nwee ike igwu ya n'ụzọ kachasị mma.
Iji malite, gaa na folda egwuregwu ahụ, gaa WTF / Config.wtf ma gbakwunye ihe ndị a na njedebe faịlụ ahụ:
Mgbe ahụ megharia folụ WoW na folda nkeonwe gị ma degharịa ya na ".wow-folda" na-enweghị nkwupute. Mgbe ahụ, anyị wụnye Wine (nchịkọta malite na "lib32-" bụ naanị maka 64 ibe n'ibe):
sudo pacman -S mmanya winetricks wine_gecko wine-mono lib32-mpg123 lib32-libldap lib32-libtxc_dxtn lib32-libpulse lib32-openal lib32-alsa-lib lib32-alsa-plugins lib32-libxml2 lib32-giflib lib32-libpng lib32-gnutls
Anyị na-ahazi Wine iji rụọ ọrụ na 32 bits (windo ga-emeghe, anyị na-emechi ya na ọ bụ ya):
UMUAKA = win32 winecfg
Anyị na-etinye mmanya na-adabere na mmemme (mgbe windo meghere, anyị na-anabata ihe niile ma gaa n'ihu):
winetricks vcrun2005sp1 vcrun2008 vcrun6 corefonts fontfix
Ugbu a, anyị ga-ekepụta SH faịlụ na-agba ọsọ egwuregwu ahụ n'ụzọ kachasị kachasị nke ọma (gbanwee "lajto" na aha njirimara gị).
Ọ bụrụ n'ijighị NVIDIA emechiri emechi:
ikwughachi "WINEDEBUG = -nwe mmanya niile / ụlọ / lajto/.wow-wotlk/wow.exe -opengl $> / dev / null" >> ~ / .wow-wotlk / wow.sh
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na iji NVIDIA emechi, anyị nwere ike ịkwalite ya karịa:
ikwughachi "WINEDEBUG = -niile __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS = 1 wine /home/lajto/.wow-wotlk/wow.exe -opengl $> / dev / null" >> ~ / .wow-wotlk / wow.sh
N'okwu m, nke na-eji NVIDIA emechibidoro, ọ tụrụ m n'anya etu kachasị mma. Na Windows 7 egwuregwu ahụ dị na 45 Fps na ogo dị obere. N'aka nke ọzọ, na Antergos na njikarịcha nke m gosipụtara, ọ na-aga 60 Fps nwere ogo kachasị. Egwu.
N'ikpeazụ, anyị mepụtara launcher (gbanwee "lajto" maka aha njirimara gị):
gedit .local / share / applications / wow-wotlk.desktop
#! / usr / bin / env xdg-open [Desktop Entry] Encoding = UTF-8 Aha = World of Warcraft Aha [hr] = World of Warcraft Exec = sh /home/lajto/.wow-wotlk/wow.sh Icon = / usr / share / icons / Numix-Square / scalable / apps / WoW.svg Terminal = ụgha Type = Ngwa Categories = Ngwa; Egwuregwu; StartupNotify = ụgha
Have nwere World of Warcraft gị dị njikere na Antergos!
Ọgwụgwụ nke ndu
Ekele m, echere m na ọ bara uru; D.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Ntinye na nhazi onwe nke Antergos GNOME [ISO April 2015]
Ihe 46 kwuru, hapụ nke gị
Ezigbo isiokwu! Abu kwa onye WoW freak, mana na Linux o nweghi mgbe m nwetara ya ka oooo :(.
Aga m anwale usoro a, enwere olile anya na ọ na-arụ ọrụ….
Maka Lol (Njikọ nke akụkọ mgbe ochie) ị nwere ike nweta arụmọrụ Windows dịka?
Anaghị m egwu League, yabụ enweghị m ike inyere gị aka ebe ahụ: (.)
Wtf? Ọ bụghị Fedora kacha mma?
Enweghị ihe dịka "nke kachasị mma." N'okwu m, ọ dị ka nhọrọ kachasị mma iji zụlite ọrụ na Haskell na PostgreSQL, ebe ọ bụ na achọrọ m sọftụwia ọgbara ọhụrụ na-arụ ọrụ na achọrọ m iburu nkà ihe ọmụma nke iji otu sistemụ arụmọrụ na PC dị ka ihe nkesa.
Eziokwu bụ na n'ikpeazụ, mgbe m mụsịrị ọtụtụ ihe, na ihe nkesa m ga-eji DragonFlyBSD, nke ga - enyere m aka ịbawanye arụmọrụ nke PostgreSQL. Nyere eziokwu ahụ, ọ dịghị mkpa ka m jiri otu OS na PC dị ka ihe nkesa, ebe ọ bụ na DragonFlyBSD anaghị arụ ọrụ na kaadị eserese m. Tupu nke a ụzọ emeghe (enwere m ike ịnọ na Debian 8). Antegos Agbalịrị m ya na njem.
Amaara m na ọtụtụ n'ime gị anaghị aghọta mgbanwe nke nkesa mgbe niile, mana ọ dị m mma na ndị ọrụ GNU / Linux nwere ike ịgbanwe nke ukwuu. Ọ bụghị naanị na ọ na-enye anyị ohere ịnwale teknụzụ ọhụrụ na dị iche iche, mana ọ na-enye anyị ohere ịgbanwe isi distro mgbe nhọrọ ochie anyị "na-adịghị mma." Yabụ oru ngo na-etinye batrị;).
Amaara m na ọ dịghị ihe kachasị mma, mana ụbọchị ole na ole gara aga, ị tinyere ya dị ka ihe kachasị mma emetụla gị ...
Debian ma ọ bụ CentOS / RHEL kachasị mma maka sava, ị maara na ị gaghị enwe nsogbu.
Ọ kachasị mma enwere: 3. Ọ bụ otu n'ime ọkacha mmasị m.
Raul P. dijo
Ajuju di nfe; Antegos na-enye ohere nke multiboot
Zaghachi ka Raul P
Ọ bụrụ na site na multiboot ị pụtara ibu ihe karịrị otu sistemụ arụmọrụ site na GRUB, echere m na, dị ka ọ dị na niile.
Impeccable article, ana m ekele gị. M na-eji Antergos Gnome ma ọ dị m ka nhọrọ kachasị mma na nkwekọrịta nke Arch, ọ dị oke mma, mma na ntinye nke ngwa ahụ zuru oke. Banyere.
Daalụ nke ukwuu! Ekwenyere m kpamkpam na gị, sitere na Arch, Antergos bụ onye ihe ịga nke ọma: P.
Victor Llore dijo
Nnukwu ntinye, ahụrụ m Antergos n'anya, nsogbu m enweghị ike ịwụnye uzuoku, wee gbanwee ndị ọkwọ ụgbọ ala nvidia ka ọ bụrụ nke ikpeazụ (azara nke ikpeazụ). Ihe onye nrụnye na-enweghị bụ nhọrọ ịhọrọ ndị ọkwọ ụgbọ ala na ngwa ọrụ dịka Manjaro Settings Manager, iji wụnye kernel ahụ nke ga-abara anyị uru karịa. Ekele na ekele.
Zaghachi Victor LLore
Obi dị m ụtọ na ọ baara gị uru! Na ihu ọma, Antergos / Arch akpaghị aka nhazi nke ndị ọkwọ ụgbọala mechiri emechi NVIDIA, yabụ emezuru ya site na ịwụnye nchịkọta ole na ole: P.
Kedu ka m ga-esi gbanwee akụkụ nke imechi, belata ma bulie bọtịnụ dị na windo menu windo?
Ọ bụrụ n’ịche itinye ha n’aka ekpe, echeghị m na ọ ga-ekwe omume. Nhazi nke GNOME bụ mgbanwe na nke a, ebe ọ na-agwakọta interface nke mmemme ahụ na bọtịnụ ị na-ekwu, na-eme ka ọ ghara ikwe omume ịgbanwe ebe. Echere m na ọ dịghị nhọrọ ọzọ ọ bụla kama ijide x).
Ezigbo post comrade, pucha ... Ọ bụrụ na e nwee KaOS multilib nwere 32bit, enwere ọtụtụ ngwa na-anaghị agba ọsọ n'ihi na ọ bụ naanị 64bit, Steam dịka ọmụmaatụ na maka onye egwuregwu dị ka m, na-enweghị Steam, enweghị ndụ.
Zaghachi Iván Barra
Nnọọ! nkuzi abatala m n’uche. Naanị m ga-ama otu esi etinye goto: github.com/ankitvad/goto onye nwere ike inyere m aka? Onweghị ihe mere mgbe "wụnye"
Site ugbua na-ekele gị nke ukwuu.
Achọtara m azịza nye ajụjụ m:
Azịza ya bụ:
$ wget -O goto.zip "https://github.com/ankitvad/goto/archive/master.zip"
$ tọhapụ goto.zip
$ cd goto-ukwu
$ Mee wụnye
# nke ya
# cp goto / usr / bin
# Ụzọ ọpụpụ
Ntuziaka kachasị mma maka ndị chọrọ ịmalite na Antergos Gnome. Nnukwu nsogbu m na-ahụ, n'echiche m, n'ezie, bụ ndọtị. Ha dị mkpa ịhapụ distro na mmasị gị, mana ị ga-amụkwa Bekee. E bipụtara ezigbo ọrụ na Fedora Gnome ebe a n'oge na-adịbeghị anya, ma ịchọrọ n'ezie ịnwale ha abụọ. Echere m na ịwụnye ụdị nkesa ụdị a ị ga-enwe kọmputa nke dị ọhụrụ maka akụrụngwa.
A ndu ọrụ nke ukwuu mana kedụ ọrụ ị ga - enwe iji mepụta ihe ị chọrọ iji mee ihe?
Dị ka ọ dị mfe ịwụnye nvidia ọkwọ ụgbọala ọzọ distro …… .. na nkenke, M ka na-adịghị ahụ amara ụdị a nke distros. Kedu ihe mgbu na ịnyịnya ibu ịhapụ ha dị njikere, kama ime ka ihe dịrị onye ọrụ mfe, nke bụ ọrụ nke sistemụ arụmọrụ ọ bụla.
Naanị site na ịlele ndepụta nchịkọta ndị a ga-arụnye iji nweta ndị ọkwọ ụgbọala nvidia na m na-eji ya.
Ekwenyere m na gị. Ọzọkwa, m ga-anwa anwa ikwu na ọ dịghị onye n'ime ha hapụrụ usoro ahụ njikere. Agbalịrị m ọtụtụ distros, aghaghịkwa m ime ihe ndị dị otú ahụ na ALL. Ọ bụrụ na m banye na ndị ọrụ nke distro ọ bụla, anyị niile na-apụ apụ, n'ihi na m ga-eji 24 awa rụọ ọrụ na ya ma hapụ ezigbo mmemme na ndabara xDDDD. Ọ ga-akpaghị aka ịwụnye ọkwọ ụgbọala na ọtụtụ ihe. Ma ugbu a, ọ naghị emetụ. N'ọdịnihu Achọrọ m ịme sistemụ nke m, nke bụ akụkụ nke ọrụ m n'ọdịnihu, yabụ ka anyị hụ ka ihe niile ga-adị mgbe ahụ.
Ezequiel Simeoni dijo
Ọ na-egosi na ị bụ groso na Linux na ndị ọzọ na Antergos, m na-eme nsogbu m, mgbe m wụnye ma dozie nsogbu GRUB nkịtị nke distro a, ọ na-ebugharị sistemụ mana ngebichi ahụ na-abụ ihe efu ma ọ bụ naanị pointer pointer
Mgbe ahụ, m na-abanye na desktọọpụ site na iwu na: Ctrl + Add + F2 na m nwere ike ịnyagharịa ọtụtụ, ruo mgbe m melite usoro ... mana enweghị m ike idozi nsogbu ihuenyo ọcha
Enwere m Atom processor, na INTEL vidiyo, a na-etinye ndị ọkwọ ụgbọala ahụ, (M tinyekwara ha) na ihe ọ bụla ...
Ndụmọdụ ọ bụla? Daalụ nke ukwuu
Zaghachi Ezequiel Simeoni
Amaghị m ihe nsogbu gị nwere ike ịbụ. Ajuju ole na ole:
- Kedu nsogbu GRUB ị na-ezo aka?
- have tinyela LightDM ma hazie nke ọma, nri? Haven't emetụbeghị ihe ọ bụla gbasara ya, ị nwere?
Naanị ihe m nwere ike iche bụ na LightDM na-enye gị ụdị nsogbu. Agbalịrị m ịgbanwe ya na GDM, mana m gbabara n'ime ahụhụ na-atụgharịkarị paswọọdụ m na ezighi ezi: S.
Nwere ike gbalịa ime ihe ndị a site na njedebe ederede ederede na Ctrl + Alt F2:
$ sudo systemctl kwụsị lightdm.service
$ sudo pacman -R lightdm gnome-shell-extension-lockscreen-lightdm lightdm-webkit-isiokwu-antergos lightdm-webkit2-greeter
$ sudo pacman -S lightdm gnome-shell-extension-lockscreen-lightdm lightdm-webkit-isiokwu-antergos lightdm-webkit2-greeter
$ sudo systemctl nyeere lightdm.service aka
Malitegharịa ekwentị $ sudo
Gbalịa gwa m.
Banyere ndị ọkwọ ụgbọ ala Intel, ịkwesighi ịwụnye ha, ebe ha na-abịa na ndabara. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị kwuo na ị nwere ike ịnweta desktọọpụ ahụ site na ọnụ ya, echeghị m na ndị ọkwọ ụgbọ ala eserese bụ nsogbu.
I meela nke ukwuu maka ịza, enweghị m ike ịpụ na desktọọpụ site na ọnụ, echere m na m nwere ike iji ya, tinye folda, mana ederede niile, ọ nweghị ihe ọsịse,
Nsogbu GRUB m hụrụ n'ọtụtụ forums nke mere ha, ugbu a echetaghị m ihe ọ kwuru, mana ọ bụ nsogbu na grub enweghị ike ịmalite Antergos, emeziri m ya site na ịtinye grub n'ọtụtụ ụzọ ruo mgbe ọ rụrụ ọrụ, Echeghị m na emetụla ihe ọ bụla aka LightDM, Amaghịdị m ihe nke ahụ bụ.
Daalụ, m ga-anwale nke ahụ ma mee ka ị mata etu o si rụọ ọrụ, achọghị m ịtinye Antergos n'ihi na o were m 3 ma ọ bụ 4 awa iji budata na ịntanetị, yana akwa enwere m nsogbu GRUB ọzọ.
Ana m ele iji OpenSUSE Tumbleweed, ọ bụ ezigbo nhọrọ?
M na-eji OpenSUSE Tumbleweed na m nwere ike ịgwa gị na ọ bụ ezigbo nhọrọ ma kwụsie ike. Naanị ihe dị na AUR ị nwere ike ịchọta ntakịrị sọftụwia karịa na OpenSUSE.
eme 6 afọ
Enwere m otu nsogbu ahụ na nsụgharị kachasị ọhụrụ, mgbe m wụnye ndị ọkwọ ụgbọala, mgbe ọ kwusịrị Ops nsogbu enweela, ọ na-emechi, na enwere m ihuenyo ojii, agbasoro m usoro ha nyere ma ọ ka dị otu, amaghịzi m ihe a ga-eme, enweghị m ike ịbanye gnome, nbanye nbanye apụtaghị, ihe niile dị na oji, bọtịnụ aka nri na-acha anụnụ anụnụ na oke nwere ike ịhụ, gịnị ọzọ ka m nwere ike ime ????
Ọ bụ ezie na na m echichi nke Antergos m anaghị achọ ọtụtụ ihe, ọ na-ese nnọọ zuru ezu maka ndị chọrọ na "ihe ọzọ"
M na-edebe ndabere.
Krlos kmarillo dijo
Site na otu echiche, ị chere na antergos dị njikere iji ya na kọmpụta rụọ ọrụ (ebe ọrụ), ma ọ bụ ụfọdụ nkwuputa ọzọ?
Isi ihe kachasị amasị m bụ:
-Ọ bụ mụ ma na-anọgide na mụ na ngwa ngwa dị ka mgbe arụnyere.
- Ọ naghị agbaji nke ahụ.
N'ihi na uche gị na-ekele.
Zaghachi Krlos Kmarillo
N’enweghị mgbagha, azịza ya bụ ee. M na-eji ya ụbọchị ole na ole, ọ naghị enye m nsogbu ọ bụla. Nke pụrụ iche;).
Daalụ maka azịza gị.
Daalụ maka nzaghachi.
Ndewo, n'ihi na m na azịza ya bụ mba, na ọ bụghị naanị n'ihi na antergor ma maka ihe ọ bụla Rolling. Maka ajụjụ gị, echere m na ihe kachasị mma maka gị bụ ịhọrọ lts (lint mint maka ihe atụ) ma ọ bụ distro na ntọhapụ kwa ọnwa ọ bụla dị ka emepe, iji distros ndị a kwụsie ike na-enweghị mgbagha karịa iji ntụgharị a ebe ị na-agaghị mara ihe nsogbu ị nwere ike ichere mgbe mmelite.
Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-achọ manjaro na-agagharị agagharị nke ọma na mmelite ya na-achịkwa ya.
Daalụ maka azịza ya, ekwenyere m gị jony127, mụ na manjaro na-arụ ọrụ nwa oge ma ọ bụ ihe niile dị mma rue mgbe mmelite mebiri sistem m, yabụ echere m na m ga-edebe linuxmint kde m. 🙂
Magburu onwe ihe niile ma ... M nwere amd ndịna, na manjaro m wụnye mfe catalyst ma na aga ndị?
Antergos dabere na Arch Dị ka Manjaro dịkwa, usoro ahụ kwesịrị ịbụ otu ihe :).
Ihe na - eme bụ na manjaro nwere ngwa a na - akpọ Manjaro Configuration Manager, ebe ndị ọkwọ ụgbọala na - apụta dị ka eserese ị nwere, naanị site na ịhọrọ nke kwekọrọ na ya nke ị nyere ya iji wụnye ma ọ na - elekọta ihe niile, enwere ike itinye ya ma wepụ ya kernels n’otu uzo, site n’itinye otu ntinye tinye ya, geek kwesiri izo aka na ngwa oru m chere. Na mbụ ha enweghị onye njikwa ahụ.
Ọfọn, m gafere Arch wiki njikọ: https://wiki.archlinux.org/index.php/AMD_Catalyst
Ama ahụ dị ezigbo mma maka post gị gbasara antergos m chere na m kwuru na m chọrọ ịnwale distro a, m wedara iso na eziokwu bụ na enwere m nsogbu ole na ole, nke mbụ cnchi dị mma mana ọ mere m ma ọ bụ ọ na-emechi naanị oge ole na ole, nsogbu ọzọ m nwere Ọ bụ na buut nkebi na nke ikpeazụ na nke na-akpasu iwe na nchekwa na-adị nwayọ nwayọ na ntinye ya na-ada dị ka ngwungwu 853 ma ọ na-ewe ihe dị ka awa 2 iji budata ha ma mee ọ ka njọ mgbe ha mechara nbudata m tụbara njehie ma kagbuo nrụnye ahụ.
Onweghi ihe mere m nke i buliri o_o. Ahụrụ m na ndị ọrụ ndị ọzọ nwekwara nsogbu. Echere m na ọ bụ n'ihi ngwaike, gịnị ka anyị ga-eme: S ...
Ndewo lajto, etinyeghị m antergos mana na mrịrị elementrị nke ugbu a nke na-anaghị eme ka m kwenye nke ukwuu ma m jisiri ike mee ka ọ rụọ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% Wow WOD ka m nwee obi ụtọ = D
Obi dị m ezigbo ụtọ! Ihe obula igwa m. Ana m egwu kwa ụbọchị na GNU / Linux, na-enweghị nkewa Windows ma ọ bụ ihe ọ bụla x).
Ọ dị mma na m gafere usoro iji wụnye bumblebee maka Artegos / arch / manjaro ebe ọ bụ na nseta ihuenyo m na usoro akọwapụtara ebe a xd
sudo pacman -S bumblebee bbswitch primus lib32-primus intel-dri xf86-video-intel nvidia nvidia-utils lib32-nvidia-utils lib32-intel-dri
sudo nano /etc/bumblebee/bumblebee.conf
ma gbaa mbọ hụ na akwa a = primus, Ọkwọ ụgbọala = nvidia
ma rụọ ọrụ na sistemụ
sudo systemctl enyere bumblebeed
bụrụ na iji kernel-bfs wụnye
sudo pacman -S nvidia -bfs
tinye onye ọrụ na bumblebee
gpasswd -a onye ọrụ bumblebee na reboot
rụọ ọrụ nvidia na mmemme
na nke ahụ bụ ya :). Ekele m na m nwere olileanya inyere mmadụ aka 😉
Enwere ụzọ ịgbanwe mpaghara desktọọpụ ederede?
Daalụ maka ederede zuru ezu dị otú ahụ.
Enwere ike ịkwụsị ọrụ ọrụ ọrụ? Eji m naanị ya na-eme ya.
Ndewo, Antergos na-adọrọ mmasị, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na nrụnye ahụ dị mfe, enwere m mgbagwoju anya na mbụ, n'ihi na ọ na-ajụ m ka m nwee njikọ ịntanetị iji gaa n'ihu, agbanyeghị, anaghị m ahụ otu esi ejikọ ya site na wifi ,, ebe ọ na-akpaghị aka Wi-Fi Njikọta nhọrọ egosighi. Laptọọpụ ahụ emeela ochie, Dell Latitude D600 nke ugbu a Windows XP ochie na-agba ọsọ na mmiri na-adịghị mma, mana nke m chọrọ itinye Linux na ọmarịcha ọkụ.
Ana m echere aro ọ bụla, daalụ.
Nicolas Ernesto dijo
Nnọọ! Enwere ike itinye naanị Antergos na njikọ ịntanetị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale distro yiri nke ahụ nke ga - enyere gị aka ịwụnye na-enweghị ịntanetị, gbalịa Manjaro.
Zaghachi Nicolás Ernesto
Ebe anyị bụ…
Chei, enwerem komputa nwere ihe osise AMD APU ma enwere m dika UBUNTU SO.
Amaara m, ọ bụghị oke amamihe n'akụkụ m, ọ dị ka c ...
Omume m ọ ga - emeziwanye na nsụgharị ndị gara aga ma ọ bụ ị nwere ike ịtụ aro distro ọzọ?
Ihe onyonyo ohuru nke WhatsApp - Budata Mmelite